Huawei P50 bụworị eziokwu: mara njirimara ya, ọnụahịa ya na mbupute ya | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | 29/07/2021 16:29 | Emelitere ka 30/07/2021 10:25 | Mobiles
Huawei taa mara ọkwa ọkwa ọhụụ ọhụrụ nke P50 abụọ. A ga-enwe ọkọlọtọ abụọ maka oge ndị ụlọ ọrụ Asia wepụtara n'okpuru nomenclature "P50", ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na akụkụ nke atọ abịarute mgbe e mesịrị, ebe ọ bụ na Huawei P50 Pro + egosighi na mmemme emere n'ehihie a.
La Usoro Huawei P50 nwere ụdị abụọ, Huawei P50 na Huawei P50 Pro, ọnụ abụọ nwere ọtụtụ iche, n'etiti ha, dịka ọmụmaatụ, bido na ihu ha. E wezụga ogwe ndị ahụ, ekwentị abụọ ahụ nwere akụkụ nke ngwaike ahụ, mana ha anaghị eme ya kpamkpam dịka o mere na mbipụta ndị gara aga.
1 Huawei P50: ihe niile gbasara nke mbụ
2 4G processor, ebe nchekwa na nchekwa
3 Igwefoto atọ maka P50
5 Batrị, njikọta na nkọwa ndị ọzọ
5.1 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
6 Huawei P50 Pro: ọnụ ọgụgụ e mere maka ịrụ ọrụ na foto
7 4G mgbawa, RAM na nchekwa
8 Ihe mmetụta igwefoto anọ
9 HarmonyOS sistemụ na ụlọ ahịa nke ya
10 Batrị, njikọ na nkọwa ndị ọzọ
10.1 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
11 Ọnụahịa na nnweta
Huawei P50: ihe niile gbasara nke mbụ
Nke mbụ bụ Huawei P50, Ngwaọrụ ezubere iji rụọ ọrụ ọ bụla, nke ihuenyo ya bụ 6,5 sentimita OLED ụdị nwere ọnụego ume ọhụrụ nke ruru 90 Hz. companylọ ọrụ Shenzhen na-enyekwa mkpebi zuru oke HD + (2.770 x1.224 .68 pikselụ) wee nweta nkwụsị IPXNUMX.
Nchịkọta a ga-echetara nke usoro P40, na-ekpori ndụ yiri ume na usoro P40 yana arụmọrụ dị egwu mgbe ị na-eji egwuregwu na ngwa ndị chọrọ ọnụego a. P50 ga-aga n’ihu ma jide ekwentị ndị a site n'ịwụnye ihe ngosi OLED dị elu.
4G processor, ebe nchekwa na nchekwa
Maka ụdị P50, Huawei ekpebiela ịhọrọ mgbawa Snapdragon 888 ọgbọ nke anọ, yabụ na agaghị enwe oke ọsọ ọsọ mgbe ị na -eji ịntanetị. Ọ ga - abụ mgbawa sitere na ndị na - emepụta Californian, otu kachasị mma mgbe ejiri ya na ngwa na aha n'okpuru HarmonyOS 2.0 sistemụ.
El Huawei P50 ma e wezụga Qualcomm si SD888 O kpebiri ịkụ nzọ na 8 GB nke Ram maka ụdị a, ma ugbu a enweghị ozi ọ bụla na ọkwa a ga-abawanye. N'ihe nchekwa, P50 nwere ụdị abụọ, 128 na 256 GB, ha abụọ nwere ọnụahịa dị iche ma ọ bụrụ na ịhọrọ n'etiti otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Igwefoto atọ maka P50
Otu ihe dị iche na usoro gara aga bụ na nhazi nke ese foto, ugbu a igwefoto bụ isi yana ndị ọzọ fọdụrụnụ abanyela na oghere abụọ. Igwefoto kachasị nke Huawei P50 bụ megapixels 50 nwere oghere nwere oghere f / 1.8 na ịbụ Leica onye nrụpụta ọzọ.
P50 nke Huawei kpebiri ịkwado oghere anya nwere ihe mmetụta 13-megapixel n'obosara-n'akuku sensọ na oghere nwere oghere f / 2.2 na nke atọ 12-megapixel telephoto call with aperture f / 3.4 with OIS 3.4. Mbugharị anya bụ 5x na mbugharị dijitalụ na-abawanye ruo 50x, ha abụọ na-enye ihe oyiyi na vidiyo ahụ mma.
Banyere ngwanrọ, P50 na -ahọrọ dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ wepụtara iji jikọta HarmonyOS 2.0, sistemụ ụlọ ọrụ ahụ na-ezube iru ọtụtụ njedebe nke ika ahụ. Ihe a ga-ahụ bụ ntinye nke ekwentị ndị ọzọ na mbadamba ihe niile na 2021/2022.
Storelọ ahịa AppGallery ga-abụ ihe mgbakwunye zuru oke iji nwee ike ibudata ngwa nke ụdị niile, nweelarị ọtụtụ puku ngwaọrụ. Ndị mmepe na-ahụ otú ụlọ ahịa ahụ si bụrụ nnukwu ohere iji bulite ngwa gị ma jiri uru nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye.
Batrị, njikọta na nkọwa ndị ọzọ
El Huawei P50 ahọrọla maka batrị 4.100 mAh na ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, na nke a ọ na-abawanye na 66W, yana oge ichere kwa ụgwọ na 100% nke ihe dị ka ọkara elekere. Ihe nlere a enweghi ugwo ikuku, mana Huawei P50 Pro bu nke a.
Ahọpụtala ịrịgo mgbawa 5G, Snapdragon 888 bụ onye nwere ike 4G, ọ na-eme ihe WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C 3.1 ma ha niile nwere isi site n'aka ndị nrụpụta. Mkpọghe nke ihuenyo ahụ bụ site na ihuenyo ahụ, na-ebu ọnụ na-erughị nke abụọ nke nzaghachi.
IKIRU 6.5-inch OLED nwere mkpebi FullHD + / 90 Hz na-enye ume ọhụrụ
Nhazi Snapdragon 888
Gbanwee CAMERA 50 megapixels f / 1.8 (isi ihe mmetụta) + 13 megapixels n'obosara f / 2.2 + 12 megapixels f / 3.4 OIS (telephoto sensor) + 5x optical zoom
N'ihu CAMERA 13 megapixels f / 2.4
OS Mmetụta 2.0
UMUAKA 4.100 mAh na-akwado ụgwọ ngwa ngwa 66W
Njikọ 4G. Bluetooth 5.2. WiFi 6. USB-C 3.1. NFC. GPS.
OTU OGWU IP68. Mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo. Da sterị.
Huawei P50 Pro: ọnụ ọgụgụ e mere maka ịrụ ọrụ na foto
E jiri ya tụnyere ụdị P50, P50 Pro nke Huawei nwere ọtụtụ isi iche, nke mbụ amalite na ihuenyo, nke na-etolite na sentimita 6,6. Onye ahọrọ n’oge a bụ OLED nwere mkpebi HD zuru oke (pikselụ 2.770 x 1.228) yana dịka ụdị nke ọzọ, ọ nwere asambodo IP68.
Ume ume ọhụrụ dị elu, ọ na-esi na 90 Hz nke Huawei P50 ruo 120 Hz, dị mma na arụmọrụ na egwuregwu vidio nke ụdị ọ bụla chọrọ nlele dị elu karịa ọkọlọtọ. Nchịkọta ahụ ka na-ekwusi ike na OLED nke ọgbọ gara aga, mmelite ahụ bụ n'ihi imezi nzaghachi mmetụ na ihuenyo ahụ.
4G mgbawa, RAM na nchekwa
Ihe nlere Huawei P50 Pro ga-abata na nhọrọ abụọ dị iche iche Mgbe ị na-ahọrọ ihe nhazi ahụ, ọ ga-aga n'ihu ịkụ nzọ na mgbaaka Qualcomm Snapdragon 888 na nhọrọ ọzọ bụ Kirin 9000. Nke mbụ na-ebute ihe osise Adreno 650, ebe nke abụọ nwere Mali G78 MP24 GPU.
Prodị Pro ga-enwe ụdị RAM abụọ, sitere na 8 ruo 12 GB, ha ekwughi ọsọ nchekwa, mana ọ ga-abụ otu kachasị ọsọ. Nchekwa ga-enwe nhọrọ atọ, 128, 256 na 512 GB, niile na-enweghị ịkọwapụta ma ọ nwere ike ịgbasa site na MicroSD.
Ihe mmetụta igwefoto anọ
P50 Pro na-ahọrọ iji ngụkọta nke ihe mmetụta anọ na modulu abuo, nke mbu bu megapixels 50 na oghere f / 1.8, ebe nke abuo bu 13 megapixel wide angle. Ekwentị ahụ gbagoro nke atọ megapixel monochrome, dị mma maka ịdebe foto dị elu.
Nke anọ nke Pro bụ 64pipixel sensor telephoto na f / 3.5 oghere oghere na OIS nwere njikọ, mbugharị anya na-adaba na 3,5x na mbugharị dijitalụ bụ 100x. Ọ bụ ezie na dibịa anya agbadata, ihe nlereanya ahụ ka dị elu mgbe ọ na-abịakwute sensọ megapixel.
HarmonyOS sistemụ na ụlọ ahịa nke ya
Mgbe emechara gam akporo na EMUI, ika ahụ kpebiri ịkụ nzọ na HarmonyOS sistemụ na nsụgharị 2.0 ya nwere nụchara anụcha onye ọrụ. HarmonyOS bu uzo di nkpa iguzo ma ghara ịdabere na Google dika otutu ndi na emeputa.
Dị ka o mere na mbụ, ekwentị Huawei agaghị enwe ọrụ Google, ọ ga-abụ ọrụ Huawei ga-agba ọsọ. Enwere ike iji ngwa site na mpụga ụlọ ahịa ahụ, dị ka ụdị na chọrọ ikike iji wụnye ngwa site na isi mmalite.
Batrị, njikọ na nkọwa ndị ọzọ
Na ụdị Huawei P50 Pro nke batrị gụnyere gụnyere batrị site na 4.100 ruo 4.360 mAh na ngwa ngwa ngwa ngwa 66W, ebe ihe omuma ozo bu ikuku ikuku. Igwe ikuku na-agba ọsọ nwere ọsọ nke 50W, zuru ezu ọbụna karịa ụgwọ nke usoro Huawei P40.
Njikọta yiri nke P50 ahụ, yana njikọ 4G ma ọ bụghị 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Bluetooth 5.2, NFC na USB-C 3.1. Ihuenyo akpọchi bụ site mkpisiaka na ihuenyoN'ịbụ onye dị oke ọsọ, enwere ike ịgbachi ya ma mechie ya site n'ụkpụrụ, akara mkpisiaka na ndị ọzọ.
IKIRU 6.6-inch OLED nwere mkpebi FullHD + / 120 Hz na-enye ume ọhụrụ
Nhazi Kirin 9000 / Snapdragon 888 4G
Nchekwa n'ime 128 / 256 / 512 GB
Gbanwee CAMERA 50 megapixels f / 1.8 (isi ihe mmetụta) + 13 megapixels n'obosara f / 2.2 + 40 megapixels (monochrome camera) f / 1.6 + 64 megapixels f / 3.5 OIS (telephoto sensor) + 3.5x optical zoom + 100x dijitalụ mbugharị
UMUAKA 4.360 mAh na-akwado ụgwọ ngwa ngwa 66W + ụgwọ ikuku 50W
E gosipụtara Huawei P50 na Huawei P50 Pro na mbụ na China, mba nke ga-ahụ mbido ya wee rute ụwa niile obere oge. A na-atụ anya ka ekwentị abụọ ahụ rute n'ọnwa Ọgọstụ, ụbọchị a ga-ekwenyeghị na China.
El Huawei P50 Pro ga -abata na August 12 na arịrịọ na China, mgbe ihe nlereanya Huawei P50 ga -eme ya obere oge, ọkachasị laa azụ n'ọnwa Septemba. Nke mbụ n'ime ha ga -abata na mgbanwe anọ, nke ọ bụla nwere ọnụ ahịa dị elu ma ọ bụrụ na ahọrọ ya na otu ma ọ bụ nhazi ọzọ, nke gafere 8/128 GB, 8/256 GB, 8/512 GB na 12/512 GB.
Ọnụahịa ahụ na-aga dị ka ndị a maka Huawei P50 na Huawei P50 Pro:
Huawei P50 Pro 12/512 GB - 8.488 yuan (euro 1.105).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei P50 bụworị eziokwu: mara njirimara ya, ọnụahịa ya na mmalite ya